Nagu saabsan - "EducationBro" - Study Magazine Abroad
Waxaan nahay mashruuc dhalinyaro ah, laakiin leh taariikh badan oo xiiso leh. The Aasaasayaasha mashruuca dhex maray badan si ay u abuuraan ah gebi ahaan cusub, gaar ah oo waxtar leh “EducationBro” – Study Magazine Abroad.
Our koox caalami ah oo ka kooban ardayda caalamiga ah iyo macalimiin khibrad weyn, Raktarka ee jaamacadda, ganacsatada yar yar iyo dadka firfircoon la-aragnimada nolosha xiiso leh.
Waan ognahay dhibaatooyinka waxbarashada dibedda:
sida codsadayaasha ah;
Maalin walba, waxa aan soo bandhigid qaababka cusub si aad waxbarasho dibada raaxo badan.
Qof walba waa in fursad u leeyihiin inay helaan waxbarasho ee dalka oo uu rabo iyo “EducationBro” doonistiisa ka caawisaa la. The “EducationBro” magazine waa a “tip baraf ah”, sida ugu dhaqsaha badan aan u ogolaan doonaa in aad dooratid xirfad in aad jeceshahay. Dooro dal in adiga iyo tayada waxbarashada haboon, iyo kharashka heerarka waxbarasho iyo nolol. Qor jaamacadda ugu fiican oo sahlan si aad u hesho waxbarasho tayo leh. Ka dibna bilowdo mustaqbalkiisa ah ee dalka wax ka mid ah dunida.
All this “EducationBro” awooddo.